septembre 2018 – filazantsaramada
MITONDRA INONA NY FAHAFATESANA?
« Fantaro ankehitriny fa Izaho dia Izaho no Izy, ka tsy misy andriamanitra eto amiko. Izaho no mahafaty sy mahavelona, ary Izaho no maharatra sy mahasitrana, ka tsy misy mahafaka amin’ny tànako. » Deotornomia 32:39 Aoka tsy ho adino fa ny Soratra Masina dia manambara fa fahafatesana no tambin’ny ota, ary ny olona rehetra dia mandalo izany […]
Publié parfilazantsaramada septembre 28, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MITONDRA INONA NY FAHAFATESANA?
MIAMBENA, AORENO TSARA IZAY SISA SAIKY MATY
« Tsarovy ny amin’ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tano mafy, ka mibebaha. » Apokalypsy 3:3a Ny fahavarimbarianana, ny tsy firaharahiana, ny fanadinoana,..sns dia mahatonga antsika hanamaivana ny fisian’ny fahasoavana efa noraisintsika, ka very izany fahasoavana izany ny hiafarany. Mandalo eo ambany masontsika ny Tenin’Andriamanitra, toriana amintsika ny toriteny kanefa ny saina variana mieritreritra zavatra hafa. Ny […]
Publié parfilazantsaramada septembre 25, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MIAMBENA, AORENO TSARA IZAY SISA SAIKY MATY
KATSAO ALOHA NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA
« Fa miharia harena ho anareo any an-danitra, izay tsy misy kalalao na harafesina manimba, sady tsy misy mpangalatra manamitrano na mangalatra. » Matio 6:20 Matetika ny vola no ataon’ny olona ho tompo mihintsy, ka mazàna ny andro fito ao anatin’ny herinandro dia hanompoany azy. Misy ny mpangalatra, maka an-keriny; ka na dia ny aina aza dia […]
Publié parfilazantsaramada septembre 14, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur KATSAO ALOHA NY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA
“Fa izay rehetra manandra-tena no haetry, ary izay rehetra manetry tena no asandratra.” Lioka 18:14b Teny nataon’i Jesosy rehefa nanao ny fanoharana ny amin’ilay Fariseo sy ilay lehilahy mpamory hetra io teny io. Samy niakatra teo an-kianjan’ny tempoly nivavaka izy roa lahy, saingy, samy nanana ny fomba nataony avy. Ilay Fariseo namelabelatra tamin’i Jesosy ny […]
Publié parfilazantsaramada septembre 7, 2018 septembre 7, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MITADY NY TAVANY